पाँच कठ्ठा जमिन बैंकमा धितो राखेर किनेको ट्रक जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आज आगो लगाएर जलाई दिए, अब बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? - Shirish News
पाँच कठ्ठा जमिन बैंकमा धितो राखेर किनेको ट्रक जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आज आगो लगाएर जलाई दिए, अब बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ?
मेरो आँखा अगाडि ट्रक जलि रह्यो । म अवाक हेरिरहे । मेरो दिमागले केहि काम गरेन।’
२०७८ पुष १९, सोमबार २१:०५ बजे
जनकपुरधाम।पाँच कठ्ठा जमिन बैंकमा धितो राखेर किनेको ट्रक जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आज आगो लगाएर जलाई दिए, अब बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ?
धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नं. ९ का ट्रकका धनी समेत रहेका चालक विजय साहले रुदै भनिरहेका छन् । उनले भने, ‘पाँच कठ्ठा जमिन बैंकमा धितो राखेर दुई वर्ष अगाडि ट्रक किनेको थिए । ट्रकको आम्दानीले ऋण तिर्ने योजना बनाएपनि अहिले ट्रकमा नै आगजनी भएपछि अब ऋण कसरी तिर्ने ठूलो आपत आई लाग्यो म माथि ।’
जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिरहाको मिर्चैया बतहाखोला नजिकै हिमालय सुगर मिल्समा उखु पु¥याएर पश्चिम तर्फ जाँदै गरेको ना ४ ख १००९ नम्बरको ट्रकमा आज विहानै आगजनी गरेका हुन् ।
साहले भने, ‘जनमतका कार्यकर्ताहरुले एक्कासी ट्रकमा ढुंगामुढा गरेपछि आत्तिएर ट्रक रोके, रोक्ने बित्तिकै तिनिहरुले ट्रकमा पेट्रोल छर्केर आगजनी गरे । मैले केहि बुझ्नै सकिन। हेर्दा हेर्दा मेरो आँखा अगाडि ट्रक जलि रह्यो । म अवाक हेरिरहे । मेरो दिमागले केहि काम गरेन।’
घाइते साह र सहचालकको मिर्चैयामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रकमा लगाइएको आगोलाई प्रहरीको सहयोगले नियन्त्रणमा लिइएपनि ट्रक पूर्णरुपले जलेर क्षतिग्रस्त भएको छ ।
यसअघि पनि जनमतका कार्यकर्ताहरुले सिरहाको चोहर्वा र सप्तरीमा राजमार्गमै ट्रक जलाएका थिए । र आज दिउँसो धनुषामा पनि एक ट्रकमा आगजनी गरेका छन् ।
पार्टीले किसान आन्दोलनको नाममा पुस १५ गतेबाट अनिश्चितकालीन तराई मधेसको दिवाकालीन सडकजाम आह्वान गरेको छ ।